पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिन संयोजन समितिको बैठक बस्दै – YesKathmandu.com
बुधबार ०२, फागुन २०७४
काठमाडौं । पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिन आज एमाले–माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाएका छन् ।
पार्टी एकतालाई टुंगोमा पुर्याउन केही दिनदेखि छलफलमा जुटेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार नेतृत्व, सांगठनिक तथा राजनीतिक वैचारिक विषय टुंग्याएका थिए ।दुई अध्यक्षबीच बनेको यही समझदारीलाई औपचारिकता दिन बुधबार संयोजन समितिको बैठक बोलाइएको जानकारी नेताहरुले दिएका छन् । बैठक ललितपुरको मानभवनमा बस्दैछ । समयबारे भने केही बताइएको छैन ।
एकता संयोजन समितिमा एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल र माओवादी केन्द्रका नेताद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा सदस्य छन् ।
गत असोज १७ गते पार्टी एकतासहित वामगठबन्धन गरेका दुई दल एमाले र माओवादीबीच पछिल्लो दिनमा एकताको पक्षमा ठोस प्रगति नभएपछि विभिन्न कोणबाट आशंकाहरु व्यक्त भएका थिए । त्यसो त नेताहरुले वार्ता सहमति नजिक पुगेको बताउँदै आएका थिए । सोमबार र मंगलबारको छलफलपछि एकताले मूर्त रुप लिएको बताइएको छ ।
बुधबार राजिनामा दिने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री
One thought on “पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिन संयोजन समितिको बैठक बस्दै”
आलो पालो प्रम हुने ?:-
ओलीले प्रधानमन्त्री छोड़ेको पनी लगभग २ वर्ष हुन लाग्यो, तर त्यश पछीका प्रम देउवा र प्रचण्डले यो दुई वर्षको अवधिमा विकासको नाममा सिंको भाच्न सकेनन । त्यसैले अब साडे दुई वर्ष मात्र ओलिले प्रम हुन पाए भने धेरै काम गर्ने समय पूगदैन , जसले गर्दा देस विकास हुन पाउदैंन । बरु प्रचण्डलाई रास्टपती देउ वा पार्टी अदक्ष तर ५ वर्ष ओली नै प्रम हुनु पर्छ । जनमत पनी ओली कै पक्षमा छ । तर जाल झेल गरेर प्रम पद बाडनु राम्रो होईन । प्रचण्डले यस्तो राजनीति गरे भने अब उनको राजनीतिक भविष्य सदक़ा लागी सकींछ । बाम गठबंधन गर्छु र एउटै पार्टी बनाउछु भनेर चुनाव ज़ित्ने अनि एमालेको भोटले चुनाव जितेर एमालेलाई नै ब्लाकमेल गर्ने ? एमालेको भोटले चुनाव जितेर कांग्रेस संग मिल्न क़ुन नैतिकताले दिंछ ? स्थानीय चुनावमा कांग्रेस संग मिल्दा पनी धरै ठाऊमा धरोटी जफत भएको बिर्सनू भो ? आफु प्रम हुन जो संग नी मिल्दिने अनि देशको हित हुने देखेर मिले भनेर जनतालाई गफ लगाउने ? देश बिकास गर्न होईन तेश्रो चोटी प्रम बन्न गठबन्धन गरेको रहेछ भनेर अब त लाटोंले नी बुझ्छ । त्यसैले पार्टी एक भए पछी आलोंपालो प्रम बन्नू ठीक हुदै होईन । ५ वर्ष एउटै व्यक्ति प्रम हुनु भन्ने नै जनमतको भावना हो । आफु अनुकूल परिस्थितिको व्याख्या गर्नु ठीक होईन ।
प्राधिकरणमा मिलेन कुरो, कांग्रेस र एमालेबीच नै चर्काे विवाद
स्थानीय चुनावमा अन्तर्घात गरेको भन्दै एमालेबाट १७ सदस्य निष्कासित
हिन्दुराष्ट्रका नाममा केशरबहादुरको धन्दा,कमल थापा तनावमा
नेपाललाई ओलीको जवाफ : मेराबिरुद्ध भूकम्प ल्याउने रे तर कति रेक्टरको ?
उपेन्द्र र महन्थ किन चहार्दै छन् विदेशीका दैलो ?
मेरो एमालेमै फर्किने चाहाना थियो, तर केपी ओलीले तारिख लगाए
खसी बोका जस्ता हाम्रा सांसद : प्रचण्डले किन्छन कि केपी ओलीले ?
माओवादीबाट महिला र मुस्लिमले मन्त्री नपाउने, को को लिँदै छन् आज सपथ ?
७ सय ४४ स्थानीय तहमा छाया सरकार गठन गर्ने माओवादी केन्द्रमा प्रस्ताव
आचारसंहिता विपरित सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई चेक बाँड्दै गृह मन्त्रालय
काँग्रेसको पूर्ण बहुमत आउनेमा कुनै शंका छैन :-प्रधानमन्त्री देउवा
भारु पाँच सय र हजार प्रतिबन्धको असर विवाह माथि सगुनमा चेक
धनगढीमा आत्मघाति बम बिस्फोट हुँदा विप्लबका कार्यकर्ताको मृत्यु
तरुण दलको महाधिबेशन सकिएपछि पौडेल उफ्रिए
करोडौँको काठ भारततर्फ बग्दै
राजपा अध्यक्ष मण्डलमा त्रिपाठी चयन, अन्य नेताहरुद्वारा विरोध